Fiakaran’ny vidim-bary any atsimo : olana fototra ny fahasarotan’ny fitaterana | NewsMada
Fiakaran’ny vidim-bary any atsimo : olana fototra ny fahasarotan’ny fitaterana
Distrika sy kaominina maromaro any amin’iny faritra atsimo iny, nahitana sondro-bidy betsaka eo amin’ny vary fotsy, nanomboka ny faran’ny volana septambra, nitohy nandritra ny volana oktobra lasa teo. Nanamarina izany rahateo ny fanadihadiana nataon’ny PADR (1) sy ny ODR (2). Amin’ny ankapobeny, tsy latsaky ny 2.100 Ar ny kilao. Nahitana izany, ohatra, ny any Beloha, Ampanihy, ary Tsihombe, anisan’ny tanàna efa sahirana eo amin’ny tsy fahampian-tsakafo, hatry ny ela.
Ho an’i Tsihombe manokana, tsy ampy ny tolotra tonga eny an-tsena noho ny fahasarotan’ny fitaterana, satria tsy maintsy miainga avy any amin’ny seranan-tsambon’i Taolagnaro ny vokatra. Somary tratra aoriana kely kosa ny fahatongavan’ny tolotra any Ampanihy, noho ny olana momba ny fitaterana ihany. Nomarihin’ireo mpivarotra anefa fa mandalo fotoana kely fotsiny izay olana izay. Noho izay olana eo amin’ny fitaterana izay ihany, efa nisy fotoana tafakatra 3.000 Ar ny kilao tany Vangaindrano, ny volana septambra, ary amin’izao, niverina manodidina ny 2.200 Ar izany taorian’ny fahavitan’ny tetezan’i Vohiposa.
Olana fototra ny fitaterana. Tsy ny vary ihany no voakasika izany fa ireo entana fampiasan’ny olona andavanandro. Lafo ny fitaterana, ankoatra ny vidin-tsaolika, ratsy ny lalana, izay mbola miampy ny tsy fandriampahalemana any amin’ny faritra maro. Manahirana ny mpandraharaha rehetra izany, izay vao mainka mampitombo ny masonkarena ka any mpanjifa hatrany no mibaby azy. Mizaka izany ny any Bekily, Vondrozo, Vohipeno, Ambovombe androy, Amboasary atsimo, Betioky …
PADR (1) : Plan d’action pour le développement rural
ODR (2) : Observatoire du riz, Madagascar